Itshaja yebhetri, itshaja yebhetri yemoto, itshaja yeLithium-iDcne
Ixabiso lomzi mveliso lokhuphiswano kunye nomgangatho olungileyo
Ngqo mveliso imveliso yakho ukuqinisekisa elona xabiso likhuphisanayo, ukuhanjiswa okukhawulezayo kunye nomgangatho ozinzileyo.
R & D yobungcali
Amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwe-20 ye-OBC kunye neebhetri.
Inkonzo elungiselelwe i-OEM
Nika uyilo lweemveliso ezizodwa, uphuhliso kunye nemveliso ngokweemfuno zabathengi
I-Chengdu Dacheng New Energy Technology Co, Ltd. iqokelele iqela leengcali kumacandelo eebhetri zokugcina, ulwazi lwe-elektroniki, ulawulo oluzenzekelayo, isoftware yekhompyuter, kunye nokusebenza kwamandla ebhetri ye-lithium kunye nendibano. Ingcali kuphando kunye nophuhliso, imveliso, ibandla kunye nokulungiswa, ukuthengisa kunye neenkonzo zobuchwephesha zokutshaja izixhobo kunye neebhetri ze-lithium.
Izixhobo zokutshaja izithuthi zombane zidibanisa itekhnoloji yamandla e-elektroniki, itekhnoloji ye-electrochemical kunye neetekhnoloji zenzekelayo ze-microcomputer ngesiseko sobuchwephesha bokutshaja kwezomkhosi. "Ukuma kwempompo okudibeneyo okukhawulezayo kunye nokutshaja iteknoloji", kusetyenziswa "ukubetha kwemposiso okuhle kunye nokukhoyo okukhoyo ngoku, ukukhupha ukubetha okungafunekiyo kwangoko" kunye "nokuhlawuliswa kunye nenkqubo yokufunyanwa okuzenzekelayo kunye nolawulo lwenkqubo" kuphuhlisiwe kwaye kwaveliswa "izixhobo ezikhawulezayo ezintsha zokutshaja ngaphakathi", ukutyhoboza okuqhelekileyo…
Amava obuchwephesha kwezomkhosi
2000 watt ngokukhawuleza manzi yinglong lithium titanate 20s 30s 24v 36v 48v 56v 72v 84v l ...
Ukutshaja ibhetri yeLithium kusetyenziswe kwizithuthuthu zombane ukubona iibhayisikile zombane ...
Ubunzima bokukhanya 84v 72v 60v 48v 100a Zenzekelayo Car Battery Itshaja Kuba ATVS / Veh Electric ...
Iinkqubo zoGcino lwaMandla eSolar zeLithium Battery Pack 24V 400ah Lifepo4 Lithium ion Bat ...
Ukutsha kwakhona iibhetri ze-lithium ion imoto yokubona indawo eyi-120v 105ah
NgoJulayi 21, 12
NgoJulayi 21, 02
Nawuphi na umbuzo okanye isicelo onaso, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo. Siza kulungisa nayiphi na ingxaki yakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24.